दीपक विष्ट | गृहपृष्ठ
Home प्रविधि दीपक विष्ट
on: June 03, 2013 प्रविधि
– अहिले कुन ब्राण्ड र मोडलको मोबाइल प्रयोग गर्नुभएको छ ?
एप्पल ब्राण्डको ‘आईफोन ४’ ।
– तपार्इंलाई यसको कुन फिचर बढी मनपर्छ ?
यसमा इण्टरनेट राम्रोसँग चल्छ । म्यासेज पठाउँदा कम्प्युटरमा जस्तै ‘कपी पेष्ट’ गर्न मिल्ने सुविधा भएकाले धेरै जनालाई म्यासेज पठाउँदा पनि झन्झट हुँदैन ।
– ल्यापटप कुन ब्राण्ड र मोडलको प्रयोग गरिरहनुभएको छ ?
एप्पल ब्राण्डकै ‘म्याकबुक’
– यसको सबैभन्दा राम्रो फिचर ?
यसमा इण्टरनेट छिटो चल्छ । सानो भएकोले बोक्दा भारी हुँदैन । ‘डाटा’ हराउने समस्या छैन । र, भाइरसबाट पनि सुरक्षित छ ।
– ग्याजेट्सका रूपमा अरू केके प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
धेरै काम आईफोनबाट हुन्छ । गीतसङ्गीत सुन्न तथा अन्य काममा पनि । त्यसैले, म व्यक्तिगत प्रयोजनमा अन्य सामान प्रयोग गर्दिनँ । घरमा भने सामसुङ ब्राण्डको एलसीडी टेलिभिजन, सामसुङकै ‘क्यासेट प्लेयर’ र सोनी ब्राण्डको ‘साउण्ड सिष्टम’ छ ।
– अब नयाँ कुनै ग्याजेट्स खरीद गर्ने योजना छ ?
सामसुङ ब्राण्डकै एलईडी टेलिभिजन खरीद गर्ने योजनामा छु ।
– प्रविधिको प्रयोग गर्दा के कुरामा बढी ध्यान दिनुहुन्छ ?
पहिला त ग्याजेट्स नहराओस् भन्नेमै बढी ध्यान दिन्छु । लोडशेडिङका कारण बिजुली आउने–जाने समयमा उपकरण ‘सट’ हुने सम्भावना हुन्छ । यसमा पनि सचेत हुन्छु । मेरो सामग्री एक्लै चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । किनकि, जति धेरै जनाले प्रयोग गर्‍यो, त्यो सामग्री त्यति नै छिटो बिग्रने सम्भावना बढी हुन्छ ।
मेरो सामग्री एक्लै चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ